I-Europe yoQeqeshiso lweendlela zeeMephu | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > I-Europe yoQeqeshiso lweendlela zeeMephu
Uhambo loLoliwe, Qeqesha uhambo eFrance, Uloliwe kuhambo Italy, Uloliwe eSwitzerland, Iingcebiso zokuhamba, Qeqesha uKhenketho e-UK, Travel Europe
Sikholelwa ukuba zokuhamba kaloliwe yenye yezona zilungileyo kwaye uninzi Iindlela eco-friendly zokuhamba. Ukuze kufezeke, silungelelanise malunga neshumi elinambini abaqhubi oololiwe abahlukeneyo ukuzisa ezona tiketi zikaloliwe zibiza kakhulu kunye nexabiso eliphantsi kulo lonke elaseYurophu. Oku kuthetha ukuba sinokunikezela ngamakhulu eendlela zokukhetha kwimephu yethu yonke yoololiwe.
Ukusuka kwi-Eurostar yesantya esiphezulu ukuya uloliwe omnandi wokulala imizila, sichitha lonke ixesha lethu ukufumana amanani angcono ngoko akuyomfuneko ukuba. Ukuze kufezeke, Sidale inqaku lesikhokelo seemephu zomgaqo kaloliwe esibonisa ezinye zeendlela zethu ezithandwayo zoololiwe. Oku kubandakanya uhambo olusuka eLondon ukuya eParis, Florence eRoma, nayo yonke indawo ephakathi.
Ukuba awuboni isitishi sakho apha – ungakhathazeki! Intsebenziswano yethu ukuvumela ukuba ufumane amatikiti kuluhlu imigca kaloliwe ezahlukeneyo – imizila zendawo, Unxibelelwano lwamanye amazwe, kwaye ezona zihamba ngesantya esiphezulu zokuhamba zonke zibandakanyiwe.
Zibone ethile uhambo ukukhuthazeka, kwaye xa sele ukulungele, entloko ukuya kwiphepha lethu lokukhangela ukufumana awona matikiti kaloliwe abhetele nangabizi mali ngeenxa zonke!
Train Transport Ingaba I-Eco-Friendly Way To Travel. Eli nqaku ibhalwe ukuba afunde Train Travel ngu Gcina A Isitimela, Amatikiti amaxabiso aphantsi Iwebhusayithi kwiHlabathi.
Imephu zethu Zemizekelo Imizekelo yeendlela zethu ezaziwa kakhulu:
1. Oololiwe abavela eLondon St Pancras International ukuya eParis
Uloliwe oqala eLondon usiya eParis ngomnye okhawulezayo eYurophu. Iqhutywa yi-Eurostar, Ungazifumana usuka e-United Kingdom uye eFrance kwiiyure nje ezimbini kunye nemizuzu elishumi elinesithandathu. Oko kukunika ixesha elingakumbi lokulala kuyo, thatha uloliwe kwaye wonwabe uhambo losuku kwikomkhulu laseFrance. Ubambe i-baguette kwaye ujikeleze i-Louvre – okanye ubonwabele nje bonke ubuhle obuza kunikezelwa yiParis.
Ukuhamba ukusuka eLondon St Pancras kwenzeka rhoqo, noololiwe abahamba phantse iyure nganye. Kunokutshiwo okufanayo malunga nokubuya eParis ukuya eLondon, kwaye ungene ebhodini uyakufumana zonke izinto eziphambili ezilindelekileyo zendlela ephezulu yoololiwe.
Ukuba uhlala e Paris, ungahambela kwelinye icala, eya kuthi ifike eLondon kusasa ekuseni ukuba uyafuna. Ungabhekisa kwi-SoHo kwaye uthathe imiboniso ye-Broadway okanye umane uyonwabela imali yokuthenga. Ngolunye uhlobo, Uloliwe ubonelela ngokuguquguqukayo okukhulu ngamaxesha okuhamba.
2. Uloliwe osuka eFlorence ukuya eRoma termini
Izixeko ezibini eziphezulu ze-Itali, UFlorence kunye neRoma likhaya kumakhulu utsalo lwezotyelelo lwazo zonke iindwendwe. Ii-buffs zobugcisa zinokuyijikeleza iVeki ilukhuni kwindawo Sistine chapel. Ukutya kunokonwabela enye ye-buffalo entsha ye-mozzarella ejikeleze. Nokuba yeyiphi na indlela oyithandayo, ezi zimbini imizi Italian are iindawo ezintle Ukuhlala iveki okanye ezintlanu.
Kanangcono, Uloliwe odibanisa uFlorence kunye neRoma zininzi kwaye azibizi. Uhambo luthatha iyure enesiqingatha kwaye unebhonasi eyongeziweyo emaphandleni ngaphandle kweefestile zakho.
3. Imephu yendlela: Uloliwe ukusuka eRoma ukuya eMilan
Sele sithetha ngeRoma, kodwa iMilan sesinye isixeko esihle e-Itali. Umahluko kumazantsi e-Itali njengoko iiapile ziiorenji, UMilan sisikhulu sanamhlanje. Eyaziwayo ngemfashini yayo ephezulu kunye neziganeko zeteknoloji ephezulu, isixeko sisiseko sokuma-ngalo lonke ixesha leholide yase-Itali. Ngelixa imozulu ingekho kangako njengeMeditera, usenokonwaba uyilo oluhle kunye nemyuziyam okanye ezibini nangaliphi na ixesha lonyaka.
Uhambo olusuka eRoma lusiya eMilan lude kunolo lukaFlorence. Akukho sidingo sakoyika, kunjalo, iseyinto enokulawuleka kakhulu iiyure ezintathu ezinesiqingatha. Oko kukunika ixesha elingakumbi loku ukonwabela ubuhle!
Amatikiti eGenoa ukuya eMilan
IRoma ukuya kwitikiti zaseMilan
I-Bologna ukuya kwitikiti zaseMilan
UFlorence ukuya kwitikiti laseMilan
4. Uloliwe osuka eHamburg ukuya eCopenhagen
Isicelo sayo nayiphi na iholide yaseYurophu, IHamburg neCopenhagen zisenokungabi zizixeko zokuqala ukuphuphuma engqondweni yakho kukhenketho. Oko lihlazo, nakuba, kuba zombini ezi zixeko zinembali kunye nemibala emibalabala. IHamburg sisixeko esikhulu sedolophu emantla eJamani. Usenokuba uvile ngayo ngenxa yonxibelelwano lwayo ne ukutya okuqhelekileyo okungaqhelekanga abarhuqa. Masonwabe iqiniso – abantu abahlala eHamburg bakwabizwa ngokuba ngamaHamburger.
Copenhagen, kwelinye icala, likomkhulu laseDenmark. Ngelixa ufuna ukutyelela e Ihlobo okanye umngcipheko wemozulu eshushu, kuninzi ekufuneka kwenziwe kwesi sixeko solwandle. Ukusuka kwizakhiwo ezinemibala eqaqambileyo ukuya kwimivalo yentsimbi yehip, Idolophu enkulu yaseDenmark inayo phantse yonke into.
Uloliwe phakathi kwezi zixeko zibini uyakuthatha ixesha. Uhambo luhlala ngaphezulu kweeyure ezintandathu, ke qiniseka ukuba uza nokuzonwabisa. Oko kuyithethwayo, oololiwe banamhlanje kwaye banokuhamba okuninzi okufumanekayo ukuze uhlale phantsi uphumle ngoxolo.
EHamburg Copenhagen Uqeqesha
Hanover eCopenhagen Uqeqesha
EBerlin eCopenhagen Uqeqesha
5. Imephu yendlela: Uloliwe osuka eZurich ukuya eBern
Ukuba ukhe wafuna ukuhamba iiAlps, awuyi kufumana ziseko zingcono zokuzihlola kune-Zurich ne-Bern. Zombini zibekwe ilizwe laseSwitzerland, ezi zixeko ziiyure nje zodwa nge train. Nangona usenokuba awuyibonanga, IBern yidolophu enkulu yaseSwitzerland, hayi naziphi na izixeko zayo ezidumileyo njengeGeneva okanye iZurich. Esi sixeko sinabantu abangaphezu kwesigidi kwaye sizele bubuhle.
; Kusenjalo, I-Zurich yaziwa njengebhanki yayo – nangona uzifumana ungena kwindawo yolwandle engasasebenziyo kunezakhiwo zayo. Isixeko sihlaliswe ngokusisigxina ngaphezulu 2,000 iminyaka kwaye inabantu abaphantse babe ngamakhulu amahlanu amawaka.
Ukuhamba koololiwe rhoqo kwaye kuqhutywa ngoololiwe banamhlanje, nangona ungabinalo ixesha elininzi lokuthetha ngale nto ngohambo olufutshane. Qhagamshela kwi-WiFi yasimahla, ukhangele kancinci, emva koko wenzile – indlela egqibeleleyo yokuhamba!
Uluhlu lwamaqabane kulo lonke elaseYurophu, Umelwe kukufumana indlela oyithandayo. Nokuba ukhangela iinketho zalapha ekhaya okanye ucwangcisa uhambo oluzekekileyo ebomini, bambelela nge Gcina A Isitimela Ukufumana ezona ndlela zikhethileyo zexabiso elikhoyo ngexabiso elifanelekileyo.
Ufuna ukuba zilungise ngendlela yethu hetalia us “I-Europe yoQeqeshiso lweendlela zeeMephu” kwi sayithi yakho? Ungakhankanya noba ukuthatha iifoto zethu kunye itekisi asinike ngetyala nge link kule post blog. Okanye nqakraza apha: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/europe-train-route-maps-guide/ ‎- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
Kule linki ilandelayo, uya kufumana iindlela zethu kakhulu ethandwa uloliwe – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, <- lo kuxhumana ukuba IsiNgesi iindlela emakhasini, kodwa nathi sibe https://www.saveatrain.com/nl_routes_sitemap.xml, kwaye ungayitshintsha i-nl ibe ngu-fr okanye i-tr kunye nezinye iilwimi ozikhethayo.
EuropeTraveling eurotrip longtrainjourneys TrainRoutes train Travel travelinspiration tripinspiration
Best Ukuqeqesha ephalisa eYurophu Ngexesha Sunset
Qeqesha uhambo eJamani, Uloliwe kuhambo Italy, Travel Europe